Guddiga cadaaladda Baarlamaanka oo sharci-darro ku tilmaamay magacaabista guddoomiyaha maxkamadda sare – SBC
Guddiga cadaaladda Baarlamaanka oo sharci-darro ku tilmaamay magacaabista guddoomiyaha maxkamadda sare
Posted by editor on April 13, 2011 Comments
Warsaxaafadeed ay soo saareen guddiga garsoorka iyo cadaaladda baarlamaanka Soomaaliya shalay ayay ku sheegeen inaan waddo sharci ah loo marin magacaabista gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka.
“Waddada loo maray magacaabidda guddoomiyaha maxkamadda sare ma ahan mid waafaqsan sharciga dalka u yaalla,” ayuu yiri guddoomiyaha guddigan Sheekh Jaamac Xaaji Xuseen oo warbaahinta la hadlay kaddib warsaxaafadeed ay kaga hadleen arrintan.
Guddoomiyaha maxkamadda sare ayaa waxaa todobaad ka hor uu madaxweynaha Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed u magacaabay mudane Caydiid C/llaahi Ilko-xanaf, kaddib markii xil ka qaadis lagu sameeyay guddoomiyihii maxkamadda sare, kaasoo uu madaxweynuhu sheegay inuusan xikaas qaban karin.
Sheekh Jaamac wuxuu sheegay in magacaabista Ilko-xanaf aan lagala tashan guddiga garsoorka iyo cadaaladda baarlamaanka Soomaaliya, taasoo uu ku tilmaamay inay ku timid wadatashi la’aanta ka dhaxaysa hay’adaha kala duwan ee dowladda Soomaaliya.
“Waxaan ka guddi ahaan u aragnaa magacaabista Ilko-xanaf mid sharcidarro ah, waayo waxaa loo magacaabay iyadoo aan wax xil-ka-qaadis ah lagu sameyn gudoomiyihii hore,” ayuu yiri Sheekh Jaamac.
Guddoomiyaha guddiga garsoorka iyo cadaaladda baarlamaanka Soomaaliya ayaa dhanka kale ugu baaqay madaxda DKMG ah in tallaabo walba oo ay qaadayaan ay kala tashadaan baarlamaanka Soomaaliya oo uu sheegay inuu yahay golaha sharci-dajinta dalka.
Sheekh Jaamac ayaa hadalkiisa kusoo beegay xilli uu guddoomiyaha maxkamadda sare la wareegay xilkiisa toddobaadkii hore kaddib markii lagu dhaariyay xaflad ka dhacday xarunta madaxtooyada oo uu goobjoog ka ahaa madaxweyne Sheekh Shariif.